Ny isa volamena nisolo tena an'ity boky fandokoana | Famoronana an-tserasera
Rafael Araujo dia Mpanao mari-trano Venezoeliana sy mpanao sary. Aza mampiasa afa-tsy pensilihazo, mpanapaka ary kompà mba hamoronana ireo sombin-javatra tsy mampino sy mazava azy hanehoana ny hakanton'ny natiora.
Fanoharana nataon'i Raphael misongadina amin'ny fanehoana ny isa volamena, isa tsy mitombina asolo tena ny litera grika ho fanomezam-boninahitra an'i Phidias, mpanao sary sokitra grika. Isa algebra tsy mandanjalanja izay manana toetra mahaliana maro ary hita tamin'ny andro taloha ho toy ny fitoviana eo amin'ny fizarana roa amin'ny tsipika. Ity refy ity dia hita na amin'ny endrika geometrika sasany na amin'ny natiora.
Amin'ny natiora dia hitantsika amin'ny lalan'ny ravina, amin'ny hatevin'ny rantsana, ny akoron'ny sifotra na amin'ny felam-boninkazo tanamasoandro. Asan'i Rafael dia tokana ary mamela ny tsipika fananganana tsy miova izay mandrafitra ny matematika amin'ny fanoharana ataon'izy ireo. Ny sasany mety naka anao mihoatra ny 100 ora vao vita.
Noho ny fangatahana voaray ho an'ny pirintin'ny asany, namoaka hevitra hamoahana boky fandokoana miaraka amin'ny sasany amin'ireo fanoharana tsara indrindra azony. Mba hamelomana ilay tetikasa, Rafael sy ny ekipany tao Sydney dia nanao fanentanana tao Kickstarter.
Araka ny hitanao amin'ny sary dia a asa mahafinaritra sy mahafinaritra izay ny filaharan'ny lolo na ny akorany dia mampiseho ny haavon'ny fahalavorariana ao anatin'ireo kajikajy matematika azon'izy ireo atao.
Antenaina fa amin'ny volana Jona boky azo baikoina dia afaka manomboka mandefa, hatramin'ny, avy amin'ny tanjona voalohany $ 27.000, amin'izao fotoana izao dia nihoaran'izy ireo hatramin'ny $ 219.789. Boky fandokoana tena manokana izay mety ho tonga fanomezana tsara indrindra ho an'ny olon-tiana na namana amin'ny alàlan'ny tena maha-izy azy ary tena mamorona.
Eto ianao dia afaka mahafantatra ny lisitry ny mpivarotra tsara indrindra amin'ny Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny hatsaran'ny matematika amin'ity boky fandokoana mahafinaritra ity